गोकुल बाँस्कोटाको प्रश्नः एमसीसीमा भाङ खाएर हस्ताक्षर गरेको हो ? – ramechhapkhabar.com
गोकुल बाँस्कोटाको प्रश्नः एमसीसीमा भाङ खाएर हस्ताक्षर गरेको हो ?
काभ्रे । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले आफैले हस्ताक्षर गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) मा के–के छ भनेर सोध्नु हाँस्यास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
नेकपा एमाले काभ्रेले बनेपामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बास्कोटाले बुझ्दै नबुझी भाङ/धतुरो खाएर हस्ताक्षर गरेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
सरकारले केहिदिन अघि मात्रै विवादित विषयबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकी सरकारलाई प्रश्न सोधेको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिमा एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको दाबी पनि गर्नुभयो ।
यसैबीच सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद ओझेलमा पार्न चीनसँग टुंगिसकेको सीमा विवाद निकालेको बाँस्कोटाको आरोप छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेकाले उहाँलाई मान्न नसकिने समेत उहाँको भनाई छ ।
आज देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाकाे सम्भावना
काठमाण्डाै – आज पनि देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने मौसमविद्ले बताएका छन् । पानी पार्ने प्रणाली खासै नभएकाले केही दिन ठूलो पानी नपर्ने मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आज दिउँसो र बेलुका धेरै ठाउँमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना छ ।
काठमाण्डाै उपत्यकामा पनि दिउँसो पछि हल्कादेखि मध्यम खालको पानी पर्ने उहाँले बताउनुभयो । ठूलो पानी नपरे पनि जमिन गलेका भिरालो जमिनमा सुक्खा पहिरो जान सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविद्को आग्रह छ ।
मौसमविद्ले अब बिस्तारै पानी पर्न कम हुने पनि बताएका छन् ।